स्वदेश फर्किइन् मनिषा कोइराला, रुपन्देही नाकाहुँदै गाडीमै सरर « MNTVONLINE.COM
स्वदेश फर्किइन् मनिषा कोइराला, रुपन्देही नाकाहुँदै गाडीमै सरर
चलचित्र अभिनेत्री मनिषा कोइराला स्वदेश फर्किएकी छिन् । उनी रुपन्देहीको सीमानाका भैरहवाको बेलहियाबाट नेपाल प्रवेश गरेकी हुन् । भारतमा आन्तरिक उडान सञ्चालन भएपछि मुम्बईबाट सीमावर्ती ईलाकासम्म विमानमा र त्यसपछि गाडीमा नै परिवारका सदस्यसहित बेलहिया नाकाबाट स्वदेश आएकी हुन् । उनीसँंगै निजी गाडीमा परिवारका सदस्यसमेत रहेको बताइएको छ ।
नेपाली सेना पश्चिम पृतनाका प्रवक्ता प्रेम थापाले सेनालाई अभिनेत्री कोइरालासहितको परिवारको आगमन विषयमा कुनै जानकारी नभएको तर उनीहरु काठमाडौँ प्रस्थान गरेको सूचना भने पाएको जानकारी दिए । नेपाल भारत सीमा विवाद चलेका बेला नेपाली राष्ट्रियताका पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्तिले नेपालमा उनको प्रशंसा भइरहेको छ । कोइरालाले भारत र नेपाली चलचित्रमा दशकौँदेखि अभिनय गर्दै आएकी छिन् ।
इन्दिरा लाछिमस्यु : पहिलो महिला धिमे वादकको कथा बृत्तचित्रमा !
अभिनेत्री कंगना रनौतविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न अदालतको आदेश !
प्रमोद खरेलको नयाँ गीत भुपुमाया–२ मा शिल्पा र सनमको अभिनय (भिडियो) !
रचना रिमाल र वसन्त सापकोटाको स्वरमा ‘माया झ्यालैमा’ सार्वजनिक